ဒိုင်တာရီထဲမှာသိမ်းထားမယ် – ပရဟိတ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြန့်ပွာရေး
admin ဒိုင်တာရီထဲမှာသိမ်းထားမယ် 04/08/2021 04/08/2021
admin ဒိုင်တာရီထဲမှာသိမ်းထားမယ် 30/10/2020 30/10/2020
admin ဒိုင်တာရီထဲမှာသိမ်းထားမယ် 13/09/2020 18/05/2021
တပည့်—>ရိုးရာအစဉ်အဆက်သ ​ဘော အ ​နေနဲ့ရဟန်းပြုတာဖြစ်သွားပြီးဆရာမ
ဆရာမ–>မွတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုမသိနားမလည်တဲ့ရိုးရာတွှေဖစ်နေတယ်။ကိလေသာကင်းရှင်းတော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်အတိုင်းရှိတဲ့တရားကိုသိတော်မူသွားတယ်။ကိလေသာတှေကိုခြစ်ထုတ်ဖို့နဲ့ငြိမ်းဖို့အတှကျကခက်ခဲပြီးလေးနက်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတော်မူသွားတယ်။ွမတ်စွာဘုရားကအမှန် တကယ်ရှိတဲ့တရားတှေအားလုံးကိုဆိုဆုံးမသွားတယ်။နာကြားရတဲ့သူတှေ​​ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြီးနားလည်တဲ့သူတွှေဖစ်ပြီးအဲဒီမှန်ကန်တဲ့သိမှု၊နားလည်မှုတှေသည်တဖြေးဖြေးနဲ့မသိမှုတှေကိုလျော့နည်းဖို့အတွက်နဲ့ကိလေသာတှေအားလုံးပေးပျာက်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းဖြစ်တယ်။တရားတော်တှေကိုနားမလည်တဲ့သူတှေ ကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာတှေကိုမမွင်ကြဘူး။ပြီးတော့လည်းပုထုဇဉ်ဘဝကိုစွန့်လွတ်ဖို့အကငြ့်ဗီဇ​ ​တှေကိုမစုဆောင်းလာခဲ့ဘူး။ွပီးတော့ရဟန်းသွားဝတ်ကြတယ်။အဲဒါကိုကမှန်ကန်ွပီးဖြောင့်မတ်တဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာ​ကြောင့်ရဟန်းပြုတာလဲလို့မေးရင်အဲဒီအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရဟန်းပြုတယ်လို့ဖြေကြတယ်။ဒါပေမယ့်တရားတော်တှေကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဟန်းဝတျတာမဟုတ်ကြဘူး။ွပီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဗီဇကိုသိပြီးတရားတော်တှေကိုလေ့လာသင်ကြားဖို့အတွက်နှင့်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တှေနဲ့ကိလေသာတှေကိုခြစ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ရဟန်းပြုဖို့သင့်တော်ွပီးလာ?ရဟန်းဝတ်ခြင်းသည်အများသူတှေရှိခိုးဖို့နှင့်အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ဖို့အတှက်ရဟန်းပြုတာမဟုတ်ဘူး။တကယ်တော့ကိလေသာတှေကိုမြင်ပြီးကိလေသာရဲ့အပြစ်တှေကိုလည်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရဟန်းပြုရခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတရားတော်တှေကိုနားလည်သဘောပေါက်မှုတှေနဲ့အတူကိလေသာတွှေခစ်ထုတ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတစ်လမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ရဟန်းပြွုပီးတရားတှေကိုလေ့လာသင်ကြားဖို့နှင့် ပုထုဇဉ်တှေထက်ပိုပြီးကိလေသာတှေကိုခြစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တနေ့တာဘဝမှာလှုပ်ရှားသွားလာမှုနနှင့်နေထိုင်မှုတှေကာပုထုဇဉ်ဘဝနှင့်ရဟန်းဘဝကတကယ့်ကိုကွှာခားလှတယ်။ပုထုဇဉ်တှေအ​​ပြျောအပါးတှေရဲ့အပြစ်တှေကိုမြင်ရဲ့လာ?
ဆရာမ–>သိမ့်မမွင်ဘူးဟုတ်၊နေ့တိုင်းပျော်ရွင်တဲ့အကြောင်းတှေရှိသေးတယ်။ပြီးတော့ပုထုဇဉ်ဘဝက​ ​နေစှန့်လွှတ်ပြီးရဟန်းဘဝကိုကူးပြောင်းကာပုထုဇဉ်ဘဝကွပုခဲ့တဲ့အပြုအမူတှေအားလုံးကိုရှောင်ရှားရတဲ့ရဟန်းဖြစ်သွားတယ်။ပုထုဇဉ်ဘဝလိုမျိုးရှေ့ဆက်ပြီးနေထိုင်လို့မ​
ဆရာမ->မသင့်တော်ဘူးဟုတ်၊ဒါပေမယ့်ပုထုဇဉ်ဘဝကပြောင်လှောင်ပြီးရယ်ကစားလို့ရတယ်။ွမတ်စွာဘုရားရဲ့အမျိုးအနွယ်တှေအားလုံးပစ္စည်းဥစ္စာပေါများကြတယ်။ပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတှေအများကြီးရှိတယ်။အဖက်ဖက်မှ ​ပျော်ရွှင်မှုတှေနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဒါပေမယ့်ကိလေသာတွှေခစ်ထုတ်ဖို့အတွက်စွန့်လွတ်လို့ရကြတယ်။တကယ့်အကငြ့်ဗီ​ဇ ​တွှေဖစ်တယ်။ဘယ်သူကမှအတင်းအဓမ္မသွားပြီးရဟန်းမဝတ်ခိုင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရဟန်းဝတ်ဖို့အ ​လောင်းစားလုပ်ခြင်း၊တိုက်တွန်းခြင်း၊စွဲဆောင်ခြင်းတှေမရှိကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရဟန်းပြုပြီးရင်ပုထုဇဉ်လိုမျိုးနေလို့မရတော့ဘူး။
တရားတော်တှေကိုလေ့လာသင်ကြားရမယ်။ွမတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် ပည့်ညှပ်ထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်အတိုင်းကငြ့်ကြံပြီးနေထိုင်ရမယ်။ရဟန်းပြုပြီးတရားတော်တှေကိုမသင်ကြားမလေ့လာဘူး၊ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တှေနဲ့အညီမကငြ့်ကြံဘူးဆိုရင် ရရဲ့လာ?
ဆရာမ–>သိမ့်သေချာတာပေါ့၊ဘာကြောင့်လဲဆို​တော့“ရတနာသုံးပါးကိုဆည်းကပ်ပါ၏”ဟုအဲလိုဆိုတဲ့သူက ရတနာသုံးပါးကို၊ယုံကွညျရာရောက်တယ်။နာကြားဖူးတဲ့တရားတော်တှေကို၊နားလည်ဖို့အတွက်နှင့်မှနျကနျစွာနဲ့အသေးစိတ်ပိုပြီးခိုင်မြဲအောင်သိရမယ်။တရားတော်တှေကိုတစ်လုံး၊နှစ်လုံးနာကြားရယုံနဲ့မလုံလောက်ဘူး။တကယ်လို့ဒါက“ကိလေသာကင်းရှင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရာပဲ”ဆိုပြီးနာကြားခဲ့ရင်တောင်မှအဲလောက်နဲ့မလုံလောက်သေးဘူး။ွမတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကြေးဇူးတှေကဘယ်လောက်ထိများသလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တရားတ်ာတှေကိုနာကြားခြင်းမှ နားလည်သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတှေအားလုံးကာသိသလိုလို၊နားလည်သလိုလိုနွဲ့ပန်ွပီးတော့ဘယ်အရာကိုမှနားမလည်တော့ဘူး။ဒါ့အပြင်နားလည်မှုပါမှားသေးတယ်။ဒါကိုသက်သေပွသွားတာကတရားတော်တှေကာအသေးစိတ်လေးနကျလှတယ်။နားလည်မှုမှန်ပြီးအမြင်မှန်ဖို့စုစောင်းလာခဲ့တဲ့သူကလွဲလို့မွတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တှေကိုလွယ်လွယ်နဲ့နားလည်သဘောပေါကျလို့မရနိုင်ဘူး။ရဟန်းဘဝနှင့်ပုထုဇဉ်ဘဝမှာလည်းတရားတော်တှေကိုနာကြားလာခဲ့ဖူးတယ်။ဒီအကြောင်းကြောင့်တရားတော်တှေကိုနားလည်တဲ့သူကပညာတှေတိုးတက်များပြားလာအောင်စုစောင်းခြင်းဖြင့်ကိလေသာ ​တွှေခစ်ထုတ်ကြတယ်။ရဟန်းမဝတ်ပေမယ့်လည်းအရိယာသစ္စာတရားတှေကို ထိုးထွင်းစွာနဲ့သိမြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလကမေးလာတဲ့အမေးကတကယ့်ကိုစဉ်းစားရမှာက ​တော့“ရဟန်းသွားပြီးမဝတ်နဲ့အုံး”နောက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ရဟန်းဝတ်ရလဲ?လို့ဖြေခိုင်းရင်အဖြေကဖြောင့်မတ်ပါ့မလာ?ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်လို့ရဟန်းပြုတာ တရားတော်တှေကိုလေ့လာသင်ကြားဖို့နှင့်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်အတိုင်းကငြ့်ကြံဖို့မဟုတ်ခဲ့ရင်ရဟန်းဝတ်ဖို့သင့်တော်ပါ့
မလာ?စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ဟိုခေတ်လွန်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထကျကသာဝတ်ထိမြို့မှာ နံနက်စောစောအချိန်မှာဘုန်းတော်ကြီးသောမြတ်စွာဘုရားက ​နောက်ခံရဟန်းသံဃာတှေနဲ့ဆွမ်းခံကြွှလာတယ်။ပုံရိပ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ရင်အသွင်အပြင်တှေအားလုံွးမတ်စွာဘုရားနဲ့ထပ်တူဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးရဟန်းသံဃာအားလုံးကာမြတ်စွားဘုရားရဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပြီးကိလေသာတှေကို
ွခစ်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။ွမတ်စွာဘုရားနဲ့ထပ်တူလိုက်နာကငြ့်ကြံခြင်းအားဖြင့်အကျိုးကြေးဇူးတှေကိုသိမြင်ကြတယ်။အပြောင်အပျက်တှေမထီမဲ့မြင်တာတှေမရှိကြဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဝိနည်းတော်နဲ့မှားစေမယ့်အသွင်အပြင်တှေမကငြ့်ွကံကြဘူး။ရဟန်းမဖြစ်သေးတဲ့သာမ ​ဏေေ​​လ​​တှေ​​တောင်မှရဟန်းတှေနဲ့ထပ်တူအသွင်အပြင်တှေလိုက်နာကငြ့်ကြံရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပည့်ညှပ်ထားတဲ့ဝိနည်းတော်နဲ့အညီရဟန်းသံဃာတှေရဲ့အသွေးအသားလည်းဖြစ်တယ်။တချို့အသက်ကြီးပေမယ့်လည်းဖြောင့်မတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တှေကသိမ်ထဲဝင်ပြီးရဟန်းမဝတ်ကြဘူး။သာမဏေအဖြစ်နဲ့ပဲရဟန်းဝတ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သာမ ​ဏေအဖြစ်နဲ့ကိလေသာတွှေခစ်ထုတ်တာတောင်မှအလွန်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ကိုယ်ရောနှုတ်ပါမကျန်ရှင်ရဟန်းတှေနဲ့အတူအားလုံးကငြ့်ကြံရမှာဖြစ်တယ်။ဝိနည်းသိက္ခာပုဒျနဲ့မညီပဲကငြ့်ကြံမှုတှေမှားခဲ့ရင်သာမ​​ဏေအတွက်တော့ရဟန်းတှေလိုမျိုးအာပတ်မသင့်ဘူး။ဒါပေမယ့်ရဟန်းတှေကဝိနည်းတော်နဲ့မညီပဲကငြ့်ကြံမှုမှားခဲ့ရင်ချက်ချင်းအာပတျသင့်တယ်။သာမ​​​​ဏေ​တှေလည်းဝိနည်းတော်နဲ့အညီလိုက်နာကငြ့်ကြံရမယ့်သိက္ခာပုဒ်တှေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့တနေ့တာဘဝမှာလိုက်နာကငြ့်ကြံရမယ့် ကိုယ်ကငြ့်ကြံမှု၊ဝစီကငြ့်ကြံမှုတှေသည်ရဟနျ​​​တှေ နဲ့အညီအားလုံးတူညီရတယ်။မလိုက်နာမကငြ့်ကြံလို့ရပါ့မလာ?
တိုင်ကလုံးလဝိရိယဒီအကျိုးတွေကိုလုပ်လာခဲ့တာနှစ် ၆၀ တောင်ကျော်လာခဲ့ပြီး။ဒါကြောင့်ပြသာနာတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်နှင့်အခက်ဆုံးသောအရာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့နားလည်မှုတွေရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့သည်ဆရာမဘယ်လိုသဘောရှိပါသလဲခင်ဗျာ?
ထဲမှာသံယုတ်တနိကယ် ဆလာရတဏ မနိကြူလသုတ်ထဲကအချက်အလက်ထဲမှာရှိတယ်။
ဖြင့်ဒီအကြောင်း ၅ ချက်နဲ့ငွေတွေကိုပစ်
ရမယ့်အချက် ၅ ချက်က
တွေဖြစ်တယ်။အချက်( ၁ )ကရသေ့ရ
နဲ့ရဟန်းနဲ့ ၁၀ ပါး၊အပါး ၂၀၊အပါး ၆၀၊ နှင့်အပါး ၁၀၀အထိလူထွက်ဖို့ပြောကြ
သုတ်မှာဒီလိုအကြောင်းတွေရှိတယ်။ကိလေသာကင်းရှင်တော်မူတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေကိုဥပမာ ၇ မျိုးနဲ့ဆိုဆုံးမသွားတယ်။ဥပမာအားဖြင့်
တွေကိုအကြောင်း ၆ မျိုးနဲ့ပြန်ပြီတော့
သမီးတို့မြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းသံဃာတွေကိုသားသမီးတို့ကအကြောင်း ၅ မျိုးနဲ့
မြင့်မြတ်တဲ့ရဟန်းသံဃာတွေကိုသားသမီးတို့ကအဲဒီအကြောင်း ၅ မျိုးနဲ့ကူ
ကြောင်း ၆ မျိုးနဲ့သားသမီးတွေကိုပြန်
(ပိဋကတ်သုတ္တန် ဂုတ္တကနိကယ် အီတီဝုတ်တကကူနာသုတ်)
(ပိဋကတ်သုတ္တန် ဂုတ္တနိကယ် ဂါထာဓမ္မပုဒ်)
admin ဒိုင်တာရီထဲမှာသိမ်းထားမယ် 15/07/2020 04/08/2021
” အမှန်အတိုင်းရှိတဲ့တရားနှင့်ကြောက်ရတဲ့COVID -19″ အသံထုတ်လွင့်သူ – D.J.ဘန်ချော်ဝိချိစီ “ကြည်ကော်ဖီခန့်စဖား”လေဒီယိုလွင့်တဲ့နေရာ- တကျကသိုလ်ဆုံခါနခင်ဟာယိုင်နယ်မြေမှာ ဆရာမဆူကွည်ဘော်လီဟန်ဝါန​​ခေနှင့်တရားဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာ,တရားဆွေးနွေးတဲ့ရက်-စနေနေ့ ၂၁.၃.၂၀၂၀
တပြည့်,အမေး—->ဆရာမဆူးကွည်ခင်ဗျာ ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်(သို့)ရှမ်းပြည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပူပြင်သော​က​တှေ၊ကြောက်စိတ်တှေအားလုံးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ွပီးတော့ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိကြဘူး၊ပြီးတော့လည်းဘယ်မှာသွားဆုံးမလည်၊ထိခိုက်နာကျင်မလာ၊ရောဂါရမလာ၊သေမလာ၊အထူးသဖွင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့COVID-19 ရောဂါဆိုတဲ့သတင်း၊တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာနာမည်ကြီးနေတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာအခြေအနေနဲ့ပက်သက် လို့အန္တာရယ်နဲ့မကင်းနိုင်တဲ့ ၃ မျို့နယ်မှာရှိတဲ့ရွာတှေ၊အခြေအနေဆိုးတှေကွုံရလို့ရှမ်းလူမျိုးတှေပူပြင်သောကဖြစ်ရတယ်။ဧည့်သည်အဖြင့်နဲ့မြောက်ပိုင်းကိုလာတဲ့အချိန်မှာ(သို့)ဟာယိုင်မြို့နယ်ကိုလာတာ၊ဒီလိုမျိုးအခြေ​အ နေဆိုးတှေနွဲ့ကုံရမလာလို့စိတ်ပူမိတယ်။ဒါပေမယ့်တကယ်တန်းကြ တော့တစ်နေ့တာဘဝမှာလည်း၊ဒုစရိုက်မှုတှေနဲ့မ ​တော်တဆဖြစ်တတ်တဲ့၊အန္တာရယ်တှေအားလုံးနဲ့တစ်ချိန်လုံးမှာ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးပတ်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာကို၊ွမတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်အနေနဲ့၊ဘယ်လိုဝေဖန် သုံးသပ်ရင်သင့်တော်မလည်ခင်ဗျာ?
ဆရာမ,အဖြေ—->ဟုတ်ကဲ့အမှန်ဆုံးက​ တော့၊တစ်ဦးတစ်ယောကျကွဖစ်ပြီးသွားတဲ့အရာကိုမဖြစ် ​ပေါ​အောင်တာဆီးလို့ရနိုင်လာ?ွမင်ရဲ့လာ?ကျွန်မတို့တှေတကယ့်အကြောင်းရင်းကိုဝေဖန် သုံးသပ်ရမယ်။အားလုံးသောအရာတှေကိုဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှသွားလုပျ လို့မရဘူးဆိုတာကျွန်မတို့နားမလည်ခဲ့ဘူး။အ​
​ကြောင်းရှိတာကလွဲလို့အရာတစ်ခုဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးအဲဒီအရာကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတယ်။ကြည့်လိုက် လို့ရှိရင်မထူးဆန်းဘူးဓမ္မတာပဲပေါ့။ဒါပေမယ့်အမှန်က ​တော့လေးလေးနက်နက်ရှိတယ်။ပြောချင်တာကအန္တာရယ်ရှိသည်ဖြစ်စေ၊မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ွမင်တာတော့ရှိတယ်၊ကြားတာလည်းရှိတယ်​တှေး​တောကြံစည်တာလည်းရှိတယ်၊တားလို့မရဘူး။ဒီလောက်နဲမြှတားလို့မရတာ၊ဘယ်အန္တာရယ်ကိုသွားတားလို့ရမလဲ ?ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ရတယ်။ဖြစ်ပြီးတော့သိလိုက်ရမှာက၊ဘယ်သူမှဘာမှလုပျလို့မရဘူး။တားဆီးလို့လည်းမရဘူး။ဒါပေမယ့်အမှန်ကိုနာလည်ရမှာကအားလုံးသောအရာတှေက၊ကိုယ်စဉ်းစားထားသလို၊ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလိုမဖြစ်ရဘူး။ဒါပေမယ့်အားလုံးသောအရာမှာ၊အကြောင်းကဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရင်၊အဲလိုအကြောင်းပဲဖြစ်ရတယ်။ပြီးတော့ခေတ်တိုင်းမှာထင်ရှားစွာသာဓကရှိတယ်။တကယ်လို့COVID-19 မရှိရင်ကျွန်မတို့တှေကတစ်ခြားကိစ္စ ​တှေကိုသွားစဉ်းစားတယ်။ကျွန်မတို့ဒီကိစ်စ ​တှေကိုမေ့သွားတယ်။ဒါပေမယ့်ဘာမဆိုဖြစ်ပေါ်လာတာဘယ်သူကလုပျလိွု့ဖစ်လာတာလဲ ?တစ်ဦးတစ်ယောက်မှလုပျလို့မရဘူး။ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။နောက်ပြီးကျွန်မတို့တကယ်သိရမှာက၊ဘယ်သူကမှတားဆီးလို့မရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှမသိနှိင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့
ွကာင့်၊ကျွနျ​တျောတို့တ ​တှေမရင်ဆိုင်ပဲ ရှောင်ရှားလိုက်ွခင်းအားဖြင့်၊အဲဒါဆိုနည်းလမ်းမှနျတယ်လို့၊ပြောနိုင်မလာခင်ဗျာ?
->ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့မှလုပ်လို့မရဘူးရှင့်၊ဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲရှင့်?တကယ်လို့ကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်၊သူများတွေလည်းကာကွယ်ကြတာပဲ။ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုပဲကာကွယ်ပါစေဖြစ်လာမယ့်အချိန်ရောက်ရင်၊ဖြစ်လာမှာပဲဟုတ်လာ။တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ကျွန်မတို့တစ်တွေမပေါ့လျော့ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တကယ်ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းကိုသိထားရင်၊တစ်စုံတစ်ရာကာ၊ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ? မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးစိတ်၊အဆုံးအမတွေအရအရာတွေအားလုံးကာ၊ကျွန်မတို့တွေမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ?မြတ်စွဘုရားကအကြောင်းတွေကိုဟောပြသွားတယ်။နီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဝေးတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါ၊အသေးစိတ်ဆုံးမသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တကယ်လို့၊သိမှုတွေမရှိရင်၊ကျွန်မတို့တွေအားလုံးကိုကြောက်နေရတယ်။ဒီနေ့လိုကျွန်မတို့တွေဒီရောဂါကိုကြောက်နေကြတယ်။နောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့၊တစ်ခြားရောဂါရှိလာရင်ကျွန်မတို့တွေကြောက်ရပြန်တယ်ဟုတ်လာ? အားလုံးကိုကြောက်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိညတော့၊အမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေမှာ၊ကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိသလို၊မကောင်းတဲ့အကြောင်းလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလူနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကောင်းပြီး၊ဟိုလူနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာမကောင်းရတာလဲ ?ဘာဖြစ်လို့တစ်ကမ္ဘာလုံးမဖြစ်ပဲနဲ့၊တစ်ယောက်တစ်လေပဲဖြစ်ရတာလဲ ?ဒီရောဂါလိုမျိုးရောက်တိုင်း၊မဖြစ်ကြဘူးဟုတ်လာ?နောက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်နေသရွေ့၊ကြောက်စိတ်ဆိုတာသေချာရှိတယ်ဟုတ်လာ?မွေးကတည်းကအားလုံးကိုကြောက်ကြတယ်။နည်းနည်းကြောက်ရမလာ၊များများကြောက်ရမလာဆိုတာ၊ကြောက်စိတ်ပေါ်မှာမှုတည်တယ်။
ဆရာမ,အဖြေ—->COVID-19 ဖြစ်တဲ့သူတွေက၊သူတို့တွေမရှောင်ရှားလို့လား?ဒါပေမယ့်သူတို့လည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်လာ?ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှောင်ရှားလည်းသူတို့တွေဖြစ်တာပါပဲဟုတ်လာ?အဲဒါကြောင့်မို့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်မတို့အနီးအနားမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတာက၊တကယ်လို့စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နဲ့သတိမထားဘူးဆိုရင်၊ဖြစ်နိုင်မယ့်လမ်းရှိတယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒီထက်ဝေးရမယ့်အကြောင်းကတော့၊သတိနဲ့နေထိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်သေးတယ်။ဘာအတွက်ကြောင့်လဲ? နောက်ပြီးအဲလိုသတိမထားတဲ့သူလည်း၊ဖြစ်ရမယ့်အချိန်မရောက်ရင်လည်းမဖြစ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရောက်တိုင်းပဲဖြစ်ကြသလာ?ဒါမှမဟုတ်ကြောက်တဲ့သူ၊သတိရှိတဲ့သူတွေလောက်ပဲမဖြစ်တာလာ?နောက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သူတွေက၊သတိမထားလို့ပဲဖြစ်တာလာ?ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုလဲ?
ဆရာမ,အဖြေ—-> ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုပဲသတိထားပါစေ၊အချိန်တန်လို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမယ့်ဖြစ်မယ့်အချိန်မရောက်ရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမယ့်မဖြစ်ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မွေးလာတာနဲ့ဖြစ်နေပြီး။ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးခဏခဏဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်လာ?ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ်နေပါစေ၊ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊စသည်ဖြင့်ဒီလိုပဲသေချာပေါက်ဖြစ်ရမယ်။တစ်ချိန်လုံးအကောင်းရည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။တစ်ချို့ကတော့စိတ်အရမ်းဆင်းရဲပြီး၊ခန္ဓာကိုယ်ကမဆင်းရဲဘူး။အကြောင်းတွေအားလုံးမသိပဲနဲ့ဒီအရာတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ? ဒါကြောင့်မို့လို့အကြောင်းကိုမသိလို့ရှိရင်ဘယ်အကြောင်းကဘယ်လိုအကျိုးကောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ဘယ်လိုအကြောင်းကအကျိုးမကောင်းတာကိုဖြစ်ပေါ်စေလဲမသိနိုင်ဘူး။
ဆရာမ—–>ဒီလက်မောင်းမှာမျက်စိမရှိဘူး။မြင်ခြင်းသည်လည်းလက်မောင်းမှာမရှိဘူးဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့မမြင်နိုင်တဲ့၊ရုပ်နှင့်မျက်စိတို့၊ထိတွေ့နိုင်မယ့်ရုပ်ရှိဖို့အတွက်၊မျက်စိရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့၊အရာလည်းရှိရမယ်။အဲဒီမြင်နိုင်တဲ့အရာက၊မျက်စိနဲ့ထိတွေ့ရမယ်။အဲဒါဆိုဘယ်မှာရှိသလဲ ? တကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားက၊မဟောပြောသွားဘူးဆိုရင်၊ရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူး။အဲဒီအရာကိုမြင်တာတော့သိတယ်၊အဲဒါဆို၊အဲဒီအရာက၊ဘယ်မှာရှိသလဲ?
ဆရာမ—–>မာ နေတယ်၊ဟုတ်ရဲ့လာ ?
မှာ(ကုသလာဓမ္မာ)ကုသိုလ်တရား၊(အကုသလာဓမ္မာ) အကုသိုလ်တရားနှင့်(အဖရာကတာဓမ္မာ) ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်တဲ့တရား၊ဆိုပြီးရှိကြတယ်။အသုဘရှိတဲ့နေရာတွေမှာ၊အမြဲတမ်းကြားနေရတယ်မဟုတ်လာ?ကုသလာဓမ္မာ၊အကုသလာဓမ္မာ၊အဖရာကတာဓမ္မာဆိုပြီးရွတ်ဆိုကြတယ်။နောက်ပြီးဘယ်သူတွေနားထောင်သလဲ?ဘယ်သူတွေနားလည်သလဲ?၊ဘယ်သူတွေသိသလဲ?နောက်ပြီးတော့တရားစခန်းကိုသွားပြီး၊သူတို့ထင်တာကတော့အများသူတွေကို၊ကိလေသာတွေကုန်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်တွေကို`၄၅’ဝါလုံး၊တစ်ခြားသူတွေထက်ပိုများပြီး၊နံနက်၊နေ့လယ်၊ညနေ၊ည၊ညဦးယံဆိုပြီး၊တစ်
မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကို၊နာကြားတဲ့အဖွဲ့တွေလေးမျိုးရှိတယ်။၁။ရဟန်း ၂။ရဟန်းမ ၃။ဥပသိကာ၎။ဥပသိကာမတို့ဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမယ့်အခုခေတ်မှာတော့၊မြတ်စွာဘုရား
admin ဒိုင်တာရီထဲမှာသိမ်းထားမယ် 08/06/2020 30/10/2020
admin ဒိုင်တာရီထဲမှာသိမ်းထားမယ် 08/06/2020 15/11/2020
148,ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးသည်၊ပညာပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ် ​ပေါ်လာတယ်။မ ​စောင့်ဆိုင်းပဲနဲ့၊ကုသိုလ်တှေကို၊တိုးတက်အောင်ချက်ချင်းပြုလုပ်ရမယ်။ဘာ‌ကြောင့်လဲဆိုတော့၊ခဏကွရင်ပါဖြစ်လာမလည်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။အကုသိုလ်မ ကောင်းမှုလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။
147, ဟော့ဒီလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေလာပြီး၊ဒီကမ်ဘ​က နေဘယ်အချိန်မှာထွကျခှါသွားရမလည် မသိနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးဘာတစ်ခုမှလည်းကိုယ့်နောက် လိုက်ပါသွားလို့မရနိုင်ဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ရွေ၊ငှေ၊ရတနာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန်ဒာကိုယ်တှေလည်းလိုက်ပါသွားလို့မရဘူး။ဒါပေမယ့်မ ​မေ့မလျာ့ပဲနဲ့အမြင်မှန်မှုတှေကိုတ‌ဖြေး‌ဖြေးစုစောင်းပြီး၊နာလည်သဘောပေါက်မှုမှန်၊အမြင်မှန်တှေတ‌ဖြေး‌ဖြေးနဲ့တိုးပှါးလာနိုင်တယ်။
146,မ ​ကောင်းမှုအကုသိုလ်သည်တကယ်အပြစ်ရှိတာကို၊ပညာက မှန်ကန်စွာနဲ့နားလည်နိုင်တယ်။အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ၊ဘယ်သူ့ကိုဖျက်စီးနေတာလဲ။အကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခဏအတွင်းမှာ၊စိတ်ကိုဖျက်စီးနေတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲဒီအကုသိုလ်ရဲ့အင်အားရှိသ ​လောက်၊တစ်ပါးသူတှေကိုပါ၊အ‌မြောက်အများဆက်ပြီးတော့ဖျက်စီးနေတယ်။
admin ဒိုင်တာရီထဲမှာသိမ်းထားမယ် 05/06/2020 22/10/2020